ကွာရှင်းခြင်းရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အဆင့် (၆)ဆင့်ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ? - Lifestyle Myanmar
ကွာရှင်းခြင်းရဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အဆင့် (၆)ဆင့်ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ?
လူတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ သူနဲ့ ထာဝရနေချင်လို့လေ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတာတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ အတူနေထိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာကို သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်က လမ်းခွဲခြင်းကလွဲပြီး အခြားနည်းလမ်း ရွေးစရာရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
ကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့အခါ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်းအပါအဝင် ရောထွေးတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေနှင့်အတူ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ သို့သော် ဒီခံစားချက်တွေက သာမန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်တွေကို တွေ့ကြုံခံစားခြင်းက နောက်ဆုံးမှာ သင့်အား ကျန်းမာတဲ့နည်းနဲ့ အချစ်ရေးမှ ရုန်းထွက်လာနိုင်အောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့ဆောင်းပါးလေးကနေ ကွာရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်တွေနဲ့ ဒါကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွာရှင်းခြင်းရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အဆင့် ၆ဆင့်
ဒါကို ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု အဆင့်ခြောက်ဆင့်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဒါက လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနောက် (သို့) ကွာရှင်းခြင်းကဲ့သို့သော တခြားအခြေအနေတွေကြောင့် တွေ့ကြုံရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ကွာရှင်းမှု ဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း အဆင့်တစ်ခုစီရဲ့ကြာချိန်ဟာ သင်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်သက် ဘယ်လောက်ကြာခဲ့သလဲ၊ သံယောဇဉ်ဘယ်လောက်ရှိခဲ့သလဲ၊ ကွာရှင်းဖို့ ဦးတည်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း ? ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။
ငြင်းပယ်ခြင်းက ကွာရှင်းပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာ တွေ့ကြုံခံစားရနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု ပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ သင်ကွာရှင်းတော့မယ့်အကြောင်းကို လက်ခံဖို့ အခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်က များသောအားဖြင့် သင့်အိမ်ထောင်ရေးပြီးဆုံးသွားမှာကို သဘောပေါက်ခြင်းအပေါ် မှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ ထိတ်လန့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခံစားချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့နှင့် သင့်ခံစားချက်တွေကို စကားလုံးမှတဆင့် ဖော်ပြဖို့ကို ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတာကို သင်သိသွားပါပြီ၊ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အပြုအမှုတွေကလည်း ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ သင့်အချစ်နဲ့ တခြားခံစားချက်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီး သင့်နှလုံးသားထဲမှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ သင့်အိမ်မက်တွေ ပျက်ပြားသွားတာကို မြင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကွာရှင်းပြီးနောက် သင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့် ထိုဝန်လေးခြင်းဟာ နာကြည်းခြင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ သင်ဟာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ငြင်းပယ်ခြင်းက အဖြစ်မှန်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာတဲ့ အဆင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ အထောက်အကူပြုတာကြောင့် ၎င်းကို အားကောင်းသော အဆင့်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သင်ဟာ ငြင်းဆန်သော ဇုန်ကနေ ထွက်လာပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေ၊ ဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေကို လက်ခံလာပါတယ်။
ကွာရှင်းခြင်းရဲ့ ဒုတိယစိတ်ခံစားမှုအဆင့်က ဒေါသထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသက သင့်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုနဲ့ နာကျင်မှုတွေကို ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ “သူဘာ့ကြောင့် ငါ့ကို ဒီလိုလုပ်ရက်နိုင်ရတာလဲ”, ” ငါ့ကို ဘာလို့ အမြဲနာကျင်စေတာလဲ” လို့တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ သင့်မိသားစု (သို့) သူငယ်ချင်းတွေကို အပြစ်တင်ပြီး သင့်ဒေါသကို အခြားဦးတည်ရာသို့ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒေါသဟာ သဘာဝအလျောက် တုန့်ပြန်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် ကွာရှင်းခြင်းရဲ့ နာကျင်မှုကို ကျော်လွှားဖို့ ခွန်အားပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ဒီခံစားချက်တွေက ခေတ္တယာယီသာဖြစ်ကြောင်း နားလည်ပါ။ ဒေါသထွက်ခြင်း ၊ အော်ငိုခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ယောက်အား သင်ခံစားရသမျှကို ပြောပြခြင်း၊ သင့်အတွေးတွေကို ချရေးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းနှင့် ယောဂလုပ်ခြင်းစတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ဒေါသကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
၃။ ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်း စိတ်ခံစားမှု
“ငါခံစားချက်တွေ ကောင်းနေပေမယ့် တစ်ချို့အချိန်တွေမှာ ငါငိုနေရတယ်”
ဒါက စိတ်ခံစားမှု ရိုလာကိုစတာအဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံက စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ ၊ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေသော်လည်း နောင်တစ်ချိန်မှာ စိတ််သက်သာရာရသွားပါလိမ့်မယ်။ လမ်းခွဲပြီးနောက် ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ထဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်ဟာ လမ်းခွဲခြင်းအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ လက်တွဲဖော်အား အပြစ်ပုံချပါလိမ့်မယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် သင်ဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ ဖရိုဖရဲ တွေ့ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရှုပ်ထွေးမှုကို ခံစားရတာက ကောင်းပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက်မယ်လို့ ယူဆခဲ့တဲ့ အရာတွေအကြား ခွဲခြားဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ဒီခံစားချက် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ကွာရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော ဥပဒေရေးရာနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စရပ်တွေကို စိုးရိမ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်၊ နေထိုင်မှုနှင့် မိဘအုပ်ထိန်းမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရတော့မှာပါ။
ဆက်သွားပါ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သူတွေနဲ့ စကားပြောပါ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီမှ အကူအညီတောင်းပါ။ သို့သော် စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ မကိုင်တွယ်ပါနဲ့။
စိတ်တူကိုယ်တူ ထူထောင်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ဘယ်သူက အလွယ်တကူ ပြတ်ချင်မှာလဲ,,ဒီတော့သင်ဟာ လက်တွဲဖော်နဲ့ အခြေအနေကို ညှိနှိုင်းဖို့ ကြိုးစားကောင်း ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အကူအညီမဲ့သလို ခံစားရနိုင်ပြီး သင့်မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကို ညှိနှိုင်းခြင်းလို့ခေါ်ပြီး ဒါက သင့်အားမှားယွင်းသော မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးပါတယ်။ ” ငါတောင်းပန်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ” ငါ့လက်တွဲဖော်ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာကို ငါလုပ်မယ်”(ဒါမှမဟုတ်) ” ငါမညည်းညူတော့ဘူး” “ကျိတ်မှိတ်ပြီး သည်းခံလိုက်ရင်ကောင်းမလား” လို့သင်တွေးမိနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင့်အိမ်ထောင်ရေးကို ကယ်တင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲပြီး အလျှော့ပေး လိုက်လျောဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ချိတ်ဆက်ဖို့ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ ချည်တွေဟာ အရမ်းပါးလွှာတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။ ကိစ္စတွေကို ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် အရမ်းကြိုးစားခြင်းက သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အကောင်းဆုံး လုပ်ရမှာက အတိတ်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Depression ဝင်ခြင်း
ဒါကို အသံတိတ်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုအဆင့်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်၊ စိတ်ပူပြီးပြီ၊ ဒေါသထွက်ပြီးပြီ၊ သင်တတ်နိုင်သလောက်လည်း ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါ သင့်အိမ်ထောင်ရေး အဆုံးသတ်သွားပြီဆိုတာကို နောက်ဆုံးနားလည်လိုက်ပါတယ်။ သင်ဟာ လူတွေ၊ စိတ်ခံစားမှု ပရမ်းပတာတွေနဲ့ ဝေးရာကို ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားနေပြီး အဖြစ်မှန်ကို လက်နက်ချလိုက်ရပါပြီ။ သို့သော် သင်ဒီလိုပြုလုပ်တာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း သင်ဟာ တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ self-depreciationနှင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း အဆင့်သို့ တဖြည်းဖြည်းနစ်မြှုပ်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ဖြစ်လာပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းက ခက်ခဲတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝ ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ ခံစားရပြီး ဖြေရှင်းနည်း မရှိပါဘူး။ ဒါက အရေးကြီးသောအဆင့်ဖြစ်ပေမယ့် ထာဝရ ခံစားချက်တစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း သတိရပါ။ ဒီအဆင့်မှာ သင်ဟာ အိမ်ထောင်ရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကနေ လွတ််မြောက်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မိသားစု (သို့) သူငယ်ချင်းတွေကို ရင်ဖွင့်ပါ။အကြံဉာဏ်တောင်းပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ စိတ်ဓါတ်ကျနေသော အခြေအနေမှ တဖြည်းဖြည်း လွတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
ကွာရှင်းခြင်းရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အတွေးတွေက ခေတ္တယာယီသာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းက သင်ဟာ သင့်အိမ်ထောင်ရေး ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ကို စတင်လက်ခံတဲ့အချိန်သို့ ရောက်လာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေကို လေးလေးနက်နက် လက်ခံလာပြီး သင့်ရဲ့ရှေ့ဆက်မယ့်လမ်းကို အာရုံစိုက်ဖို့ သင်ယူလာပါတယ်။ ဒါက အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ အဆုံးဖြစ်တာကို နားလည်သွားပြီး အသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖို့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ သူတွေဟာ ဘယ်သူကမှ ကွာရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးဘဝအတွက် သင့်အနာဂတ် အစီအစဉ်မှာ မိုင်တိုင်တွေ၊ ကလေးတွေ၊ အိမ်အသစ်တစ်လုံးဝယ်ယူခြင်း စတာတို့ ပါဝင်သော်လည်း ကွာရှင်းစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးရမယ်လို့ စိတ်ကူးမထားခဲ့ပါဘူး။ လက်တွဲဖော်ကို လက်ထပ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်နေ့ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့လည်း သင်စဉ်းစားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အတူတူ အနာဂတ် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲထားတယ်။ သူတို့ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ထားတယ်။
ဒီလိုဆက်ဆံရေး အဆုံးသတ်တဲ့အခါ သင့်အိမ်မက်နဲ့ အစီအစဉ်အားလုံး ပြိုကွဲသွားပါပြီ၊ ကွာရှင်းခြင်းရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်သန်းခြင်းက ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကွာရှင်းခြင်းက တစ်ခုတည်းသော ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပြီး သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကို ပျော်ရွင်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အိမ်ထောင်ရေးဟာ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းနဲ့ သင့်ဘဝကို အလျှော့ပေး၊ လိုက်လျောစရာ မလိုပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ ” အဆင်ပြေပါတယ်” လို့ သင့်ကိုယ်သင် ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းမြင်မှုနှင့် ခရီးစဉ်သစ်တစ်ခုကို စတင်ပါ။ ခရီးသွားတာမျိုး၊ သင်တန်းတတ်တာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို relax လုပ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘဝကို သင်တဖန်ပြန်ချစ်ရပါလိမ့်မယ်။